५ असार, २०७७ शीतलपाटीन्युज डटकम। 1807
"साँझका पाहुना देवता सरह" - कसले बनायो होला यो कथन ? खै मलाई त कहिल्यै यस्तो सौभाग्य प्राप्त भएन। आफु पाहुना हुँदा पनि अनि आफ्नो घरमा पाहुना आउँदा पनि। उल्टै पाहुना भन्ने बित्तिकै मलाई त ज्वरो आउँछ। आफु अलि कन्जुस जस्तो परेछु कि क्या हो ? नत्र यस्तो अनुभव नहुनु पर्ने। शायद मेरो अनुभवको दायरा भित्र राम्रा भन्दा अन्य पाहुनाको बाहुल्यता भएर हो कि ? अब पाठकलाई लाग्ला अन्य पाहुना भनेको के हो ? वास्तवमा पाहुना पनि विभिन्न थरिका हुँदा रैछन्। ठुला पाहुना, साना पाहुना, बिहानका पाहुना, साँझका पाहुना, कहिलेकाही आउने पाहुना, घरिघरि आउने पाहुना, सोझा पाहुना, बाङ्गा पाहुना, दिलदार पाहुना, टापटिपे पाहुना इत्यादी। यिनीहरुलाई पनि फेरि राम्रा पाहुना अनि नराम्रा पाहुनामा बर्गिकरण गर्न मिल्छ। यो कस्तो प्रकारको पाहुनाको परिभाषा हो, कसरि बुझ्ने? मेरो आफ्नो सुस्म बुद्धिले भ्याए सम्म ब्याख्या गर्छु है त l
"ठुला पाहुना" : यस्ता पाहुनाहरु समुहमा विश्वास गर्ने खालका हुन्छन र जता जान्छन बथान लिएर जान्छन। यिनीहरुलाई एकदुइ दिन पाहुना लागेर पुग्दैन। मिल्यो भने महिनौ बस्न तयार हुन्छन यी लाज पचायेकाहरु।
"साना पाहुना" : यस्ता पाहुनाहरु ठुला पाहुना जस्तै हुन् खाली आकार मात्रै साना।
"बिहानका पाहुना र साँझका पाहुना": यसमा अन्तर खासै नभए पनि साँझका पाहुना अलि खतरनाक हुन्छन। यिनीहरुको उद्देस्य बेलुकाको खाना हजम गर्नमा बढी केन्द्रित हुन्छ। कुनै न कुनै बहाना बनाएर खाना घिचेरै छोडछन् यस्ता पाहुनाहरुले।
कहिलेकाही आउने पाहुना प्राय स्वागत योग्य नै हुन्छन तर यिनीहरु पनि ठुला पाहुना र साना पाहुनाको बर्गमा परे भने अतिथि सत्कारमा गारो पर्छ।
घरिघरि आउने पाहुनाको त के कुरागर्नु। यिनीहरुको नाम मात्र सम्झिदा पनि ज्वरो आउँछ मलाई।
सोझा पाहुनाहरु सहि अर्थमा राम्रा हुन्छन। यस्ता पाहुनाहरु खाली हात आउदैनन। केहि न केहि कोशेली लिएरै आउँछन्। मलाई त यस्ता पाहुनाहरु घरि घरि आउने पाहुनामा परिणत भएपनि हुन्थ्यो नि जस्तो लाग्छ।
बाङ्गा पाहुनाहरुलाई सुलसुले पाहुना पनि भनिन्छ। यिनीहरु बढी चियो चर्चो गर्ने खालका हुन्छन। यता गयो एउटाको कुरा काट्यो अनि अर्को घरमा अरुकै कुरा काट्यो। यिनीहरु अरुको झगडामा रमाउने स्वभावका हुन्छन। यस्ता पाहुनाहरुलाई ढोकामै नमस्ते गरेर फर्काउनै कल्याण हुन्छ। अन्यथा यिनीहरुले कसैलाई छोडदैनन् र जहाँ जान्छन झगडाको बिउ छरेर हिडछन। यस्ता पाहुनाहरुको बर्गमा आफ्नै नजिकका आफन्तहरु बढी भेटिएको एउटा मत सर्वेक्षणले देखाएकोछ।
दिलदार पाहुनाहरु सोझा पाहुना नै हुन् फरक के भने यिनीहरु रंगीन स्वभावक हुन्छन। पिउनु र पिलाउनु यिनीहरुलाई मन पर्छ र त्यसको लागि यिनीहरु जे गर्न पनि तयार रहन्छन।
टापटिपे पाहुनाहरु माथि बर्णन गरिएका सबै भन्दा फरक तर सबै प्रकारमा पाइने एउटा रोग जस्तै हो। अरुको घरमा पाहुना लाग्ने मात्र नभई कोहि नभएको अवस्थामा समान चोर्ने यिनीहरुको बानी हुन्छ। होसियारी नै एकमात्र उपाय हो यस्ता पाहुनाहरुसंग बच्नलाई।
हुन त पाहुनाहरु अरु पनि धेरै प्रकारका होलान तर अहिलेको अंशमा मैले यति मात्र बयान गर्ने निधो गरे। पछि लेख्न लाई पनि त केहि राख्नै पर्यो।
मेरो विचार संग पाठकबृन्द कतिको सहमत हुनुहुन्छ ? आफु पाहुना लाग्ने गरेको ठाउँ र आफ्नो पाहुनाको प्रकार छुट्याउने हैनत अब?
single free dating sites without registering black dating sites free
gay pagan dating site gay black dick dating site " gay dating sites"
gay asexual dating site gay dating site like tinder gay senior dating
patrick taylor gay dating male gay dating sites free gay dating sights
best dating sites for gay men im gay we are dating vine gay venezuelean men dating/
the league dating gay spain gay dating gay teen dating services
gay dating hookup sites gay dating japan cuban gay dating sites
“I haven’t seen you in these parts,” the barkeep said, sidling over and above to where I sat. “Name’s Bao.” He stated it exuberantly, as if solemn word of honour of his exploits were shared by means of settlers about multifariousafire in Aeternum. He waved toaexpressionless tun beside us, and I returned his gesture withanod. He filledafield-glasses and slid it to me across the stained red wood of the excluding before continuing. “Asabetting chains, I’d be willing to wageraadequate bit of silver you’re in Ebonscale Reach in search more than the swig and sights,” he said, eyes glancing from the sword sheathed on my hip to the bow slung across my back. http://images.google.co.nz/url?q=https://renewworld.ru/data-vyhoda-new-world/
review of descreet gay dating dating older gay black men what like gay men dating women
gay asian men dating black men non hookup gay dating sites decent gay dating sites